Isbuunyada dharka lagu dhaqo
Nadiifinta & nadiifinta
Dhab ahaan & chamois synthetic
Sidee loo doortaa tuwaalka leh waxqabadka qiimaha sare?
Muuqaalka: Shukumaannada wanaagsan waa kuwo jilicsan oo midab leh. Mid shukumaan daabacan ama mid caadi ah, illaa iyo inta ay maadaddu fiican tahay, shaqo wanaagsanaanta, waa inay ahaato mid aad u qurux badan. ...
Qalab noocee ah ayaad ubaahantahay inaad ku nadiifiso gaarigaaga？
1.Microfiber shukumaan ： maxaa yeelay ururku waa mid aad u jilicsan, waligiisna ha dhaawacin gaariga markii la nadiifinayo gaariga.Badeecada waxay leedahay awood dhuuqis biyo oo aad u badan, awooda nuugista biyaha waa 610 jeer tan shukumaanka caadiga ah, waa 23 jeer tan shukumaanka deerskin. Shukumaanka gaariga ee gaariga lagu dhaqo, ma noqon doono ...
Faa'iidooyinka iyo faa'iido darrada tuwaallada microfiber
Xulashada alaabada shukumaanku waa mid aad muhiim u ah, tuwaalka fiber-ka superfine-ka ahi ma daadiyo timo, ma qurxiyo, wuxuu leeyahay galmada ugu fiican ee maqaarka u fiican, sidaa darteed waxaa doonaya macaamiisha suuqa, sidaas darteed, ugu dambeyntii waa superfine shukumaan adag
Marka la eego dib u eegista macaamiisha, 10ka tuwaal ee ugu fiican qabow 2021
Waqtiga qaboojinta ee jimicsiga ka dib waa qayb muhiim ah oo ka mid ah jimicsi kasta-laakiin waxay soo baxday in qabow ku sii socdo jimicsiga oo dhan ay si siman muhiim u tahay. Sayniska wuxuu muujinayaa in hoos udhaca heerkulka jirka uu dheereyn karo waqtiga jimicsiga, taas oo hagaajinaysa waxqabadka jimicsiga. Ciyaartoy badan oo xirfadlayaal ah ayaa ...
Maxay yihiin waxyaabaha ceyriinka ah ee shukumaanka microfiber?
Shukumaan adag oo loo yaqaan 'Superfine fiber' waa nooc tayo sare leh oo teknolojiyad sare leh oo alaab ceyriin ah. Shukumaan adag oo loo yaqaan 'Superfine fiber' ayaa laga sameeyaa polyester iyo brocade composites oo ka sameysan polyester laga soo dhoofiyo iyo walxaha brocade. Mashiinka Microfiber waa heerka caadiga ah ee 8020 polyester tayo sare leh iyo fiilo isku dhafan brocade ...
Tuwaalka Microfiber wuu 'neefsan karaa'
Maqaarka 'Superfine fiber terry' wuxuu leeyahay jilicsanaan wanaagsan, muuqaalka jilitaanka deerskin, qallayl wanaagsan, maqaarka miro guduudka saamaynta velvet, toosnaanta wanaagsan iyo waxqabadka kala-bixinta wanaagsan. Maaddadan noocan ah ayaa si ballaadhan loo isticmaalaa, waxaana loo isticmaali karaa si ballaadhan dharka, nadiifinta, tirtirka, maqaar macmal ah iyo alaabo kale ...
Galoofyo noocee ah ayaa ku haboon dhaqitaanka gaariga?
Maydhista baabuurtu ma adka, laakiin waxaad shaqada ka dhigi kartaa mid aad u fudud adigoo iibsanaya galoofisyo nadiifin oo tayo sare leh. Kudar in yar oo saabuun ah, baaldi ama laba iyo xoogaa biyo ah, waxaadna heli kartaa gaari dhalaalaya oo nadiif ah. Hubi xulashadeena alaabada si aad uhesho galoofyada dharka lagu dhaqo ee ugu fiican suuqa. Chenille micr ...
Timaha shukumaan microfiber
Marka ay timaado caadooyinka qubayska kadib, dhaqanka caadiga ah waa in si fudud loo soo qaado tuwaalka ugu dhow loona daayo inuu qalalo. Si kastaba ha noqotee, shukumaanka aad dooratay waxaa laga yaabaa inuu isku kiciyo timahaaga, gaar ahaan haddii timaha timaha aysan toos ahayn. Shukumaanada Microfiber ayaa badanaa lagu amaanaa inay dedejiyaan waqtiga qalajinta timaha, iyo f ...
Maxaad u isticmaashaa dhaqitaanka gaarigaaga?
Dhuumaha biyaha lagu dhaqo: Gaariga waxaa ku yaal tuubooyin biyaha lagu dhaqo oo gaar ah, kuwaas oo loo kala qaybin karo nylon iyo tuubooyin adag sida ay u kala duwan yihiin qalabyada, laguna qalabeeyey qasabado rusheeyaha. Milkiilayaasha gawaarida waxay kaliya u baahan yihiin inay ku xirmaan tuubada biyaha si ay u gaaraan saameynta buufinta biyaha ee sareysa ...
Maxay yihiin talaabooyinka lagu dhaqo gaariga?
Dhaqida gawaarida waa inay fiiro gaar ah u yeelataa jaranjarada, haddii kale way fududahay in la kala jaro rinjiga gaariga oo saameyn ku yeesho muuqaalka. Waxaan kuu sheegayaa inaad beertid si aad u dhaqdo gaarigaaga sida soo socota: 1. Marka hore iska bixi gaariga suufkiisa gudihiisa oo nadiifi. 2. Si tartiib ah biyo ugu mayr dusha sare ee gaariga, oo si taxaddar leh u biyo ...
Farqiga u dhexeeya tuwaalka suufka ah iyo tuwaalka microfiber ee nuugista biyaha
Shukumaanada cudbiga ah iyo tuwaalada microfiber waa laba aag oo gebi ahaanba ka duwan nuugista biyaha. Suufka laftiisu aad ayuu u nuugaa, hawsha sameynta tuwaallada waxaa lagu sumeyn doonaa walax saliideed leh, bilowga isticmaalka shukumaannada saafiga ah ee saafiga ah biyaha ma nuugaan, seddex ama afar jeer ka dib ...
Waa maxay tuwaalka microfiber?
Microfiber sidoo kale waa nooc tayo sare leh, qalab cayriin oo dhar tayo sare leh. Dhexda dhexdeeda oo yar awgeed, adkaanshaha foorarka ee Microfiber aad ayuu u yar yahay, faybarkuna wuxuu dareemayaa inuu aad u jilicsan yahay. Waxay leedahay shaqo nadiifin aad u xoog badan oo aan biyuhu lahayn oo saamayn neefsasho leh.
Waa inaan ogaanno horumarka wadajirka ah ee saamileyda, qiimaha shaqaalaha iyo qiimaha macaamiisha.
Ku dar:Shangde Plaza, No.8 Kangle Str, Shijiazhuang 050051, Shiinaha
Right Xuquuqda daabacaadda - 2010-2022: Dhammaan Xuquuqda Ayaa Leedahay. Talooyin - Alaabada Kulul - Khariidadda bogga
Qalabka Gaariga Lagu Dhaqo, Maro Dhaqid Baabuur, Maqaarka Chamois Oo La Iibinayo, Dhaqida Tuwaalka Microfiber, Dharka Nadiifinta Baabuurta, 100% Caano maqaar ido dhab ah,